China Ogwe osisi niile siri ike nke ihe ndina ụlọ obibi ụlọ ndina abalị # 0103 rụpụta na ụlọ ọrụ | Yamazonhome
Oghere Ndidi nile nke osisi na-adọrọ adọrọ Ime roomlọ Ime Nri Nightlọ # 0103
Aha: Obi Igbe
Nọmba nlereanya: Amac-0103
Nha: 600mm * 400 * 960mm
Tenon na tenon Ọdịdị + osisi siri ike osisi
Isi ihe bụ osisi oak nke toro kemgbe otu narị afọ. Ọ nwere ederede siri ike, njupụta ikuku dị elu, usoro mara mma na uru nchịkọta dị mma. FAS-ọkwa ebubara oak na-acha ọcha, dị ka otu n'ime ndị a ma ama na osisi ahụ, nwere ezigbo nguzosi ike na nkwụsi ike, ọ dịkwa iche Ọdịdị ugwu osisi ahụ dị mmiri mmiri na-eme ka mmụọ sie ike na ọnọdụ obi okike, na mkpokọta mkpokọta ahụ kwụsiri ike na enweghị ịma jijiji. na-enwe mmetụta ma na-adịgide adịgide.
Nkuku ịchịkọta ọgwụgwọ
Ọmarịcha nkà ịrụ gburugburu akụkụ imewe
Ọnụ nke kabinet bụ mechie na mechie n'ụzọ dị irè iji gbochie mbibi bumping. A na-agbazi ihu dị n'ime na n'èzí na varnish, mgbochi corrosion na mmiri na-eguzogide, ogo ogo 360 na-enweghị nkuku nwụrụ anwụ, na ọdịdị ahụ bụ otu. Nhazi dị mfe na-enwekarị ike ịnagide polishing nke oge, ya na ahịrị dị ọcha, agba doro anya ma dị mfe, uniquedị pụrụ iche, jupụtara na Nordic minimalism.
Elu-edu ọla ahụ
Ihe osise osisi siri ike nke ejiri ọla kọpa mee dị mfe ma dịkwa okomoko. Mgbe oge iri ise jiri nlezianya na-egbuchasị, elu dị larịị na-enweghị ogwe, nna ukwu nyochara ugboro ugboro ugboro iri na ise, na -emepụta ihe ngosi dị egwu dị otú a. Edere akụkụ drawer ya na nkwonkwo mmeba, Kpochapụ ọdịiche ahụ, gbochie nkụ ahụ ịgbawa na nrụrụ. The textured ọla ahụ bụ ihe inogide na-adịghị mfe nchara.
Ọtụtụ drawer na nha dị iche iche
Nmepụta ọtụtụ ihe, ọrụ nchekwa dị ike, na ya, ụlọ na-adị mma ma dozie n'otu ntabi anya. Nnukwu mbadamba ahụ kwụ ọtọ ma ihe ahụ juputara, ọ nweghịkwa mkpịsị aka mkpịsị aka, nke nwere ike ịchekwa ihe na akwụkwọ, ma nwee ike ịrụ ọrụ. Enwere ike iji ya mee ihe dị ka kabinet drawer, ime ụlọ eji eme ihe TV, ime ụlọ akụkụ akụkụ TV, yana mkpokọta dị iche iche na ọtụtụ nde ojiji. Ogwe drawer nkeonwe na-enye gị nchebe zuru oke.
Okpokoro osisi ndu siri ike nwere nguzogide siri ike
Solid osisi slide rails, kaadị oghere eji drawer, ezigbo ịbịaru, ìhè na nkịtị, adịghị mfe atọpụ, inogide na-eyi na-eguzogide. A na-egbutu oghere kaadi ahụ n'ụzọ zuru oke, eserese ahụ apụtaghị, ịchekwa oge na mbọ, ma dịkwa mfe iwe.
Uru ihe n'ihi na osisi siri ike kabinet ụkwụ
Okpokoro osisi osisi siri ike bụ ụkwụ na-enweghị atụ, siri ike ma dịgide. Soro echiche imewe nke ime ụlọ ahụ niile wee chepụta usoro dabara adaba maka ọmarịcha ụlọ gị maka ebumnuche ejiji. Ala nwere ihe na-enweghị mmịcha na ejiji na-eguzogide ọgwụ, nke na-eme ka ọ dị mfe ịkwanye na ịdọrọ. Ọ gaghị emetụta ndị ọzọ, chebe ala ma gbatịkwuo ọrụ nke kabinet.
Nke gara aga: Inflatable ịbịaru yoga agba egwú mgbatị ute inflatable ikuku track 0384
Osote: Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Slider Door Wardrobe Bedroom Ngwa ụlọ # 0108
Bohn Hut Na-akpụzi Osisi Dog House
Unitarp sere n'elu Inflatable Yoga ute Okenye okenye Swi ...
Modern Simple White Oak Japanese Style Jikọtara ...
Anọ Seere Wicker Ọkụ Multifunctional Pet Nwee ...
White Oak Multifunctional Ugboro abụọ Bed Solid Wood ...